कोरोनको त्रास बढेपछि आजैदेखि लागुहुने गरी लगातार १४ दिन सार्वजनिक बिदा, तर कुन कुन ठाउमा ? — Imandarmedia.com
कोरोनको त्रास बढेपछि आजैदेखि लागुहुने गरी लगातार १४ दिन सार्वजनिक बिदा, तर कुन कुन ठाउमा ?
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिंदै कुवेत सरकारले आज (बिहीबार)देखि दुई सातासम्मलाई सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ । ठूलो संख्यामा नेपाली र अरु देशका आप्रवासी कामदार रहेको कुवेतले संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै यस्तो गरेको हो ।
करिब ४२ लाख जनसंख्या रहेको कुबेतमा ७० प्रतिशत आप्रवासी कामदार रहेको तथ्यांक छ । करिब ८५ हजार नेपाली कामदार कुवेतमा कार्यरत छन् । कुवेतले शुक्रबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी कार्गो बाहेकका सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द गर्ने भएको छ । यसले नेपाली कामदार पनि प्रभावित हुनेछन् ।
कुवेतमा हालम्म ७२ जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको अन्तरष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । उता युरोपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर बढ्दै गइरहेको बेला डेनमार्कले मानिसहरुको जमघट र शैक्षिक संस्था सञ्चालनमा रोक लगाएको छ । यस्तो प्रतिबन्ध लगाउने डेनमार्क दोस्रो युरोपेली मुलुक हो । यसअघि इटलीले यस्तै प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
डेनमार्कको प्रधानमन्त्री मेट्टे फेडेरिक्सनले सबै विश्वविद्यालय, कलेज, स्कुल र शिशु स्याहार केन्द्रहरु दुई साताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएकी छन् । मानिसहरुलाई अत्यावश्यक काममा बाहेक घरबाहिर निस्कन भनिएको छ । सार्वजनिक सभा, सम्मेलन गर्न रोक लगाइएको छ । घरभित्रै एक सय जनाभन्दा बढी मानिसहरु सहभागी हुने कार्यक्रम गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
कम संवेदनशील सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरुलाई घर फिर्ता गर्ने र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुलाई घरमै बसेर काम गर्न प्रोत्साहित गरिने प्रधानमन्त्री फेडेरिक्सनको भनाइ छ । डेनमार्कमा बुधबारमात्रै चार सय ४२ जना कोरोना भाइरसका नयाँ संक्रमित फेला परेका थिए । युरोपमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या २२ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । हालसम्मको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी प्रभावित युरोपेली मुलुक इटली हो । इटलीमा मात्रै ८ सय २७ जनाको मृत्यु भएको छ भने १२ हजार १ सय ४९ जना संक्रमित छन् ।
एक तथ्यांकअनुसार युरोपभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट ९५१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २३ हजार ३३९ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम गर्ने उपायस्वरुप अमेरिकाले बेलायतबाहेकका सबै युरोपेली मुलुकबाट अमेरिका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको छ । यस्तो प्रतिबन्ध शुक्रबार मध्यरातिबाट लागु हुने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् ।
बुधबार टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत् ट्रम्पले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रमा नयाँ संक्रमण भित्रिन नदिन हामीले युरोपबाट अमेरिकामा हुने सबै किसिमका यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएका छौं ।’एकमहिने प्रतिबन्ध शुक्रबार मध्यरातिबाट लागू हुने ट्रम्पले बताए ।
कोरोनाबाट प्रभावित साना लगानीबाट सञ्चालित व्यवसायलाई अर्बौं डलर सहयोग गर्ने घोषणा पनि ट्रम्पले गरेका छन् । करमा सहुलियत दिने उपायबारे निर्णय लिन पनि ट्रम्पले संसदलाई आग्रह गरेका छन् । यसअघि ट्रम्पले ट्वीटरमार्फत् भनेका थिए, ‘कोरोना भाइरसको चुनौतीसँग लड्नका लागि संघीय सरकार सबै शक्ति प्रयोग गर्न तयार छ ।’
ट्रम्पले भनेका छन्, ‘हाम्रो शत्रु समान छ, वास्तवमा कोरोना भाइरस पूरै विश्वको शत्रु हो । हामी यसबाट छिटोभन्दा छिटो सुरक्षित रहनुपर्छ । मेरालागि अमेरिकी जनताको सुरक्षा र जीवनभन्दा महत्वपूर्ण अरु केही छैन ।’ अमेरिकामा हालसम्म कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या १ हजार १ ३५ छ । यसैको कारण ३८ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या एक लाख १ लाख १५ हजार भन्दा बढी पुगिसकेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरसको संक्रमण सबैभन्दा धेरै चीन, इटाली, इरान र कोरियामा पाइएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वभर फैलिँदै गएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनले बुधबार विश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेको छ ।
यसैबीच अमेरिकाको पिट्सबर्गमा यसै महिना हुने तय भएको जी–७ देशहरुको मन्त्रीस्तरीय बैठकको तरिका फेरबदल गरिएको छ । मार्च २४ र २५ तारिकमा हुने बैठक अब भिडियो कन्फरेन्समार्फत् हुने छ ।
यस्तै लस एन्जलेन्समा यसै वर्षको जून महिनामा हुने ई–३ एक्सो (मनोरञ्जनात्मक इलेक्ट्रोनिक प्रदर्शनी) रद्द गरिएको छ । भिडियो गेमिङ इन्डष्ट्रीका लागि महत्वपूर्ण मानिने यो एक्स्पोमा विश्वभरका भिडियो गेम बनाउने कम्पनीहरु र गेम खेल्ने व्यक्तिहरु सहभागी हुन्छन् ।
स्यानिटाइजरले हात धुदाँ मर्छन कोरोनाका किटाणु ?
विश्वभर कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि उच्च सर्तकता अपनाउन थालिएको छ । कोरोनाको संक्रमणबाट बच्न अधिकाशं मानिले मास्क र ह्याण्ड स्यानिटाइजरको प्रयोगमा जोड दिएका छन् ।
तर अहिले बजारमा ह्याण्ड स्यानिटाइजरको कालोबजारी शुरु भएको छ । बजार मुल्य भन्दा दोब्बर तेब्बर मुल्यसम्म लिन थालिएको स्यानिटाइजरको मुल्य बारे सरकारले नियमन भने गर्न सकेको छैन । अधिकाशं औषधी पसलमा अभाव भएको स्यानिटाइजर पाइएको स्थानमा भने महंगो मुल्यमा बिक्रि हुदै आएको छ । तर स्यानिटाइजरको प्रयोगले कोरोनाको किटाणु मार्छ त ?
कुनैपनि रोगको सम्भावित किटाणुहरुलाई मार्नका लागि स्यानिटाइजरको प्रयोग गरिन्छ । तर कोरोनाको किटाणु मार्न स्यानिटाइजर भरपर्दो विकल्प भने होइन । चिकित्सकहरुका अनुसार स्यानिटाइजरको एक थोपाले हत्केलाका सबै किटाणुलाई मार्छ भन्ने सोच गलत हो । धेरैजसो स्यानिटाइजर ६० प्रतिशत अल्कोहलका साथ आउँछन् र कीटाणु पूरै मार्न यो पर्याप्त हुँदैन । साबुनले हात धुनु बढी राम्रो हो ।
स्यानिटाइजरमा अल्कोहलको मात्रा कम र ट्राइक्लोस्यानको मात्रा धेरै हुन्छ । ट्राइक्लोस्यान शक्तिशाली एन्टिब्याक्टेरियल एजेन्ट हो । तर ट्राइक्लोस्यानले रुघाखोकीमा एन्टीबायोटिकले काम गर्न सक्दैन । अल्कोहल भएका स्यानिटाइजरले सामान्य ब्याक्टेरियालाई सुपरबग बनाइदिन्छ । साथै स्यानिटाइजरले प्रयोगले खराब ब्याक्टेरियाका साथै राम्रो ब्याक्टेरियालाई पनि मारिदिन्छ ।
यो तपाईंको रोगप्रतिरोधक क्षमताका लागि पटक्कै राम्रो होइन । त्यसैले सम्भव भएसम्म समय समयमा हात धुनु नै प्रभावकारी विकल्प हो । यदि कारणवशं पटक पटक हात धुन सम्भव नभए मात्र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने विकल्पको रुपमा राख्नुपर्दछ । विशेषतः कसैसँग भेटेपछि वा खाना खानुअघि अनिवार्य हात धुनुपर्छ । कोरोनाको संक्रमण हात मिलाउँदा सर्ने भएकोले हात मिलाउन बन्द गर्नुपर्दछ ।
कोरोना भाइरसबारे हामीले थाहा पाउनु पर्ने र सचेत हुनु पर्ने ९ तथ्य समेटेर हाम्रा पाठकहरूका लागि यो ब्रिफिङ पेपर तयार गरेका छौं।